UMugabe ‘usuke engalele emihlanganweni, uvikela amehlo’ | News24
UMugabe ‘usuke engalele emihlanganweni, uvikela amehlo’
Harare – UMengameli waseZimbabwe, uRobert Mugabe, 93, usuke engalele uma ngabe evale amehlo akhe isikhathi eside emicimbini yomphakathi, kodwa usuke ephumuza amehlo akhe kumalambu ahlabayo, omkhulumelayo usho kanjalo ngoLwesine.
UMugabe usejwayele ukuthi ahlale amehlo akhe evaliwe izindaweni asuke ehambele kuzo, okubalwa nangesikhathi ebonakala emhlanganweni weWorld Economic Forum eNingizimu Afrika.
“Ngizizwa njengesahluleki uma ngabe kunombhalo othi uMengameli uyalala ezingqungqutheleni,” okhulumela uMengameli uGeorge Charamba ucashunwe esho kanjalo ephephandabeni likahulumeni iHerald newspaper.
“Eminyakeni engu-93, kunento eyenzekayo emehlweni futhi uMengameli akakwazi ukuhlushwa amalambu ahlabayo. Uma ubheka indlela ama ngayo, ubheka phansi, agweme ukukhanya okuza ngqo.”
OLUNYE UDABA: IZITHOMBE: Ubehuqa ubuthongo uMugabe engqungqutheleni eseThekwini
UCharamba uqhathanise uMugabe noNelson Mandela, nowayenenkinga yokuthi amehlo akhe ayengezwani nokukhanya kwamakhamera uma ngabe kuthathwa izithombe ngemuva kweminyaka esebenza emadwaleni ngesikhathi eboshwe eRobben Island.
“Wawungavumelekile nokuthi usebenzise ama-flash (amalambu okukhanyisa ikhamera) noma nini uma ngabe esegunjini,” usho kanje.
UMugabe, nosekuthola kunzima ukuzihambela ngaphandle kokusizwa, kuyimanje usezweni iSingapore njengokunye kokuvakasha kwakhe okujwayelekile ukuze ahlolwe ngokwezempilo.
UCharamba uthi uMengameli uthola ukwelashwa okukhethekile kwamehlo, wathi kodwa isimo sakhe sempilo sihle.
Ukuvakasha kukaMugabe emazweni angaphandle ukuze athole ukwelashwa kuhlale kuthola ukugxekwa eZimbabwe njengoba umkhakha wezempilo kuleliya lizwe ufadalele ngenxa yenkinga yezomnotho.